Miseensi OPDO waliti bu’ee waliti araarame wanti ummata oromoo galchu hin jiru – Kichuu
HomeAfaan OromooMiseensi OPDO waliti bu’ee waliti araarame wanti ummata oromoo galchu hin jiru
Miseensi OPDO waliti bu’ee waliti araarame wanti ummata oromoo galchu hin jiru
COLD WAR: Miseensi OPDO waliti bu’ee waliti araarame wanti ummata oromoo galchu hin jiru .
kanan dura “Beekaan Eranaa “waan tokko jedhe jarri sobdeet wal-lolti kaayyoon isaani fi karoorri isaani tokkoo hin amaniinaa jedhe. Dr Abiyis ta’ee Lammaan garagarummaa hin qaban ,kana Taayyeen dubbii dhoksaa waan hin beeknef ifa baasera jecha taayyee lammaan beekamtii addaa barbaachaaf malee nuti hundi itti wali galleerra paartii bilxiginnati jedhe kun dhugaa dha.
Egaan warri gaafa leenjii miseensota ODP tif kennu waa’een lammaa kanaan booda dhumatera jedhan kunis dhugaa dha.
Namni kolonel Gammachuu Ayyaanaa fira fakkatee mana hidhaati darbee Lammaa Magarsaati
Hogganaan paartii keenyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa garaagarummaa yaadaa dhiimma Ida’amuu irratti qaban karaa VOA tiin ibsanii turan. Haa tahu malee, hojii Abbootiin Gadaa Oromoo, Jarsooliin Biyyaa, Miseensoonni Koree GG Paartii Keenyaa fi Hoggantoonni Bulleeyyiin Paartii keenyaa rakkicha hiikuuf hojii raawwataniin waliigalteen uumameera.
Kabajamaa ummata Oromoo, Kabajamtoota Miseensootaa fi Deeggartoota Paartii Keenyaa hundaan baga gammaddan jechuu barbaanna.
Waajjira Paartii Badhaadhiina Oromiyaa WPBO
Obbo Lammaa fi Dr. Abiy walitti araaraman jedhanii ummata burjaajessuuf diraamaan PP itti fufee jira. Oduu simbirtuutiin OBN kan dhiheesse “waliigalaniiru” jedha. Garuu maalirratti akka walii galan hin ibsu. Kuni diraamaadha. Jaarsota biyyaa obbo Lammaatti baasuu isaanii quba qabna. Garuu wanti irratti walii galame akka hin jirre dhageenye. Waldhabdeen jara lamaanii waldhabdee dhuunfaatii miti. Waldhabdee kaayooti. Jaarsota biyyaa itti baasanii deebi’anii piropogaandaa dhaaf itti fayyadaman. Akka waan obbo Lammaan Maddamarii fi PP didee ture deebi’ee fudhatetti fakkeessanii piropogaandaa irratti hojjachaa jiru. Ummatni hanga gurra isaatiin waan obbo Lammaan jedhu dhaga’utti piropogaandaa miidiyaalee mootummaatiin hafarfamu amnuu hin qabu.
Jaal Daawub Ibsaa is one old and boring but very reliable, credible and consistent politician. In this era of political drama, hyperbole and mockery politics, which the Oromo people dislike, he can lead the biggest party into election, and come out winner in Oromiyaa, specially if Lema Magarsaa continues within PP and Jawar Mohammed joins different party.
komaandii poostiin aanaalee godina Qellem Wallaggaa jalatti argaman gandoota baadiyaa hunda irraa geggeessitoota bu’uuraa warra jedhaman kaabinee gandaa/Caasaa gandaa jettee namoota Afur Afur leenjii dhimma paartii Badhaadhinaa kennuuf aanaalee aanaaleetti guyyaa borii Mudde 23/2019 irraa eegalee guyyoota sadiif(3) hanga gaafa 25/2019 Roobii dhufuutti leenjii kennuuf waamaa akka jirtu oduun keessoo isaaniiti miliqxee baate ni ibsiti.Kanuma irraa ka’uun namootni dhimma kanarratti hirmaachuuf jettan yoo jiraattan irraa akka of qusattan isin beeksifna.Leenjii dhimma Oromummaa balleessuuf ergama Nafxanyootaa lafa qabsiisuuf afarfamu kan dhaloota Oromoo lafarraa balleessuuf Dr Abiyyi kaayyeffatee itti jirutti kan hirmaate kamiyyuu diina Oromooti.Mootummaa waraana sirratti labsee ilmaan kee,obbolaa kee,abbaa kee,haadha kee dhiiga dhangalaasaa jiru mormuutu isinirraa eegama malee ergama badiisaa irratti hirmaachuun xurii seenaa galmeeffachuudha.Yeroo darbes milishootni gaafa leenjiif waamamaa turan akka hin hirmaanneef ibsaa turreerra.Kanneen gorsa keenya dhagahanii dhiisan nagaan mana isaanii keessa uummaticha keessa jiraachaa jiru.Kanneen lukkee ta’anii waraana olii gadi oofuuf diina waliin hojjechuuf waadaa galan hedduun isaanii jireenya akkamii keessa akka jiran walumaan argaa jirra.Hedduunshee manaa fi maatii ishee dhiistee mooraa waraanaatti galuun daabboo fi koshoroodhaan gubachaa jirti.Ammas irra deebinee isinitti himna leenjii kana kan irratti hirmaates kan maluuf kanuma.Kanaaf irraa akka of qusattan gadi jabeessinee isin akeekkachiisna.Yoo diddanii hirmaattanis tarkaanfii isin eeggatuuf harkaan ibiddatti akka of galchitan hubachaa deemuun keessan barbaachisaadha.”
Obbo Lammaan durattis paartii isaa keessaa hin baane. Hojii isaas naamusaan geggeessaa jira. Garaagarummaa yaadaa jiru ammoo ifatti nutti himee jira. Garaagarummaa kana wal mariidhaan haa furannuu irratti wal tahuun waan deeggaramu. Qaroominas. Lammaan dammarame jechuun garuu waan biraati. Nama ejjennoo hin qabne xawalwaallee fakkeessanii isa arrabsuu fi saba duratti shakkamsiisuuf dhama’uu dha. Kanaafuu hoomaan kaadiree Bilxiginnaa suuta jedhaa. Obbo Lammaan akka VOA irratti nutti himetti garaagarummaa kaayyoo salphaatti hin araaramne (kan tokko kaayyoo Oromoof amanamuu fi kaan kaayyoo san irraa maquu) tu dhalate. Garaagarummaan kaayyoo siyaasaa akkasii ammoo akka wal dhibdee dhirsaa fi niitiitti ‘atis dhiis atis dhiisii’dhaan kan dhumatu miti. Akka an hubadhutti Lammaan bakkuma ganamaa jira. Kaleessa gaaf garee isaa hogganee Wayyaanee irratti qabsoo keessoo godhus ”Gooftaan keenya ummata Oromooti, gooftaa biraa hin qabnu” kan jedhee onnee ummata Oromoo hawate isuma ture. Har’as kaayyoo kana irratti warra biraa mucucaatee isa ganeen wal dhabe. Ammas dhugaan garam akka gortu walumaan eegnee laalla. Namoonni ni dhalatu, ni du’u. Kaayyoon saba keenyaa garuu dhaloota irraa dhalatatti dabraa as geesse, borus ni jiraatti.
Warri akka Abiyyi Ahimadii fi Taayyee Danda’aa baay’ee Oromoo akka hin miine beekaa. Kan Oromoo miidhu warra akka Lammaa Magarsaati. Waan har’a Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nuun jedhe hin irraanfadhu. “Kaayyoon Abiyyi Ahimad baay’ee ifaa dha. Waan barbaadu nutti himaa, nutti agarsiisaas jira. Lammaa Magarsaa garuu ofuma isaayyuu waan barbaadu hin beeku. Lammaan dhiyeenyuma kanayyuu si’a gurguddaa lama Oromoo ganeera. Kanaaf isa hin amaniinaa” jedhe. Yeroo darbe jarri lamaan akka waan wal lolaniitti afarfamaa ture. Oduun galgala kana baate garuu dubbiin jaarsummaadhaan akka dhumtee fi waliin hojjechuuf akka waliif galan eerti. Uummanni keenya nama adda baasaa beekaa. Nama eenyummaa isaa hin beekne duukaa hin girrisiinaa!
Voice of Independent Oromia : Barattoonni Oromoo Y. Jimmaa lakkoofsaan 13 ta’an barnoota irraa ari’amanii jiraachuu
Si hin amanu yaa fardaa, cancalaan bishaan dhugdaa, kooraadhaan gangalatta! jedhe geeraraan. Waan OPDO itti dhiisaa! Duruu Oromoof hin dhaabanne; kaayyoo fi Oromummaa hin qaban. Namni bilisummaa fi abbaa-biyyummaa Oromotti amanu wanna gochuu qabu beeka! Kana irra dabartanii olola fi burjaajessa ekeraa Minilik nurraa dhaabaa!